YH HYDRAULIC - China Hydraulic Fittings, Hydraulic Ferrules, Hydraulic Machines Supplier
Flange hydraulique 87312 SAE J516 Fitting Fabricant hydraulic fitment
Amin'ny fanampiana matanjaka amin'ny fahaiza-manaon'ireo manam-pahaizana mahay, dia vitantsika ny mamolavola ny gamut misy ny hydraulic flange 87312 SAE J516 Fitting Manufacturer hydraulic fitting. Mahavariana amin'ny alàlan'ny teknolojia maoderina izy io amin'ny fampiasana ny fitaovam-pamokarana ambony noho ny fitarihana ny manam-pahaizana ara-teknika. Fitaovana: Teknika karbonika vy: sokajina sokajin-doko: fametahana, rindrina ...
kofehy karbonin'ny kofehy JIC fitrandrahana mahaleotena jic
Ny orinasanay dia namolavola ny zavakanto tamin'ny fanolorana kapila vita amin'ny karbonina JIC hydraulic fittings straight hydraulic hosina jic fittings vavy ho an'ny mpanjifa. kofehy vita amin'ny karbonin'ny JIC hydraulic fittings mahaleotika jic fiompiana fatoriana jic dia noforonina sy novelariny araka ny filàna sy ny takian'ny mpanjifa. Ny sakafom-pifandraisana dia natokana ho an'ny lehilahy amin'ny endrika samihafa, teti-panorona, lamina ary ...
Fitaovam-pitaterana hydraulic / hydraulic fitaterana fanangonana
Isika no orindraharaha lehibe indrindra ao amin'ny indostria, dia mazoto manolotra ny fitaovana tsara indrindra amin'ny fiara fitaterana hydraulic / hydraulic fitaterana. Ny fitrandrahana fitrandrahana hydraulique / fitrandrahana hosodoko fatorana dia noforonina avy amin'ny matihanina matihanina mampiasa ny fitaovana tsara indrindra sy ny teknolojia avo lenta. Misy siramamy fanondran-jiro fandroana / fantsom-panafody fanjaitra hosoka no ankasitrahana ...
Lehilahy ORFS tombo-kofehy matevina azo ampiasaina ho an'ny hosotra azo ampiasaina
Fikambanana lehibe indrindra isika izay mikendry ny famolavolana sy famokarana vondron'antofana malefaka matevina ao amin'ny ORFS. Ireo vokatra ireo dia novokarina tamin'ny fitaovana tsara indrindra izay azo avy amin'ny fifandraisana sy ny mpivarotra azo itokisana. Manoloana ireo fepetra isan-karazany amin'ny mpanjifa, dia atolotr'izy ireo ireto tavy fantsom-baton-dehilahy ireto:
70011 / 72011hydraulic banjo fitting, bsp / metric banjo hydraulic fittings and connectors
Manolotra karazany tsara indrindra 70011 / 72011hydraulic banjo fitting, bsp / metric banjo hydraulic fittings ary connectors ho an'ny mpanjifa sarobidy. Noho ny fahaiza-manao tsara indrindra sy ny endriny tsy dia mazava loatra, ireo 70011 / 72011hydraulic banjo fitting, bsp / metric banjo hydraulic fittings sy connectors dia tena takiana amin'ny fangatahana indostrialy isan-karazany. Manolotra 70011 / 72011hydraulic banjo fitting, bsp / metric banjo hydraulic fittings sy connectors dia atolotra ao anatin'ny ...
YH HYDRAULIC Vehivavy 90 Hydraulic Hose Ferrule Fitting
Ny fikambanantsika iray dia manana fikambanana izay manome fitaovana maro amin'ny YH HYDRAULIC Vehivavy 90 Hydraulic Hose Ferrule fitting. Ny vokatra rehetra dia novolavolaina tao amin'ny toeram-pamokaran-toeram-piofanana izay mampiasa fitaovana avo lenta. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fizotry ny famokarana dia avy amin'ny mpivarotra azo antoka amin'ny tsena. Ankoatr'izany, manolotra ireo YH HYDRAULIC Vehivavy 90 Hydraulic Hose Ferrule fitting amin'ny fomba samihafa ...
316 Stainless Steel Male metric DIN Heavy Folding Fitting
Fikambanana lehibe indrindra isika izay miasa amin'ny famokarana sy famokarana andian-tafika 316 Stainless Steel Male metric DIN Heavy Braided Fittings. Ireo vokatra ireo dia novokarina tamin'ny fitaovana tsara indrindra izay azo avy amin'ny fifandraisana sy ny mpivarotra azo itokisana. Manoloana ireo fitakiana samihafa amin'ny mpanjifa, dia manolotra ireto 316 Stainless Steel Male Metric ireto isika ...
kapila elektrika ho an'ny kapila elektrika
Mba hisorohana ny toerana mendri-piderana ao amin'ny indostria, dia manolotra adi-varotra metaly metaly karazam-bary vita amin'ny hydraulic izay mifandanja tsara amin'ny natiora ary ampiasaina amin'ny fifanarahana elektrika. Ny loharanon-koditra vita amin'ny hydrophys hydraulic dia avy amin'ny mpivarotra efa voamarina ao amin'ny orinasa, izay mamorona azy araka ny lanjany voafetra ...
Fitrandrahana Hydraulique 45 Degree BSP Fiant Flat Seat
Manolotra karazana toetrandro avo lenta tsara indrindra an'ny Hydraulic Fitting 45 Degree BSP Female Flat Seat amin'ny mpanjifa sarobidy izahay. Ny fahaiza-manao tsara indrindra, ny fanamafisana ny lozam-pifamoivoizana, ny fiainana maharitra sy ny endriny tsy misy dikany dia mahatonga ny Hydraulic Fitantanana 45 Degree BSP Female Flat Seat amin'ny ankapobeny. Amin'ny alàlan'ny tambajotram-pampielezanay malalaka, izahay dia manolotra ireo Hydraulic Fitting 45 Degree BSP ...
zinc plated double connector hydraulic fit steel carbon
Miaraka amin'ny fanampiana matanjaka amin'ny fahaiza-manaon'ireo manam-pahaizana mahay, dia afaka manamboatra ny gamut misy zinc plated double connector hydraulic steel fitting carbon. Mahavariana amin'ny alàlan'ny teknolojia maoderina izy io amin'ny fampiasana ny fitaovam-pamokarana ambony noho ny fitarihana ny manam-pahaizana ara-teknika. Type: Fittings Model Number: P90011 Brand Name: YH HYDRAULIC Place ...
Karazana vy sy fiaramanidina avo lenta avo lenta
Manamarika toerana miavaka sy mavitrika eny an-tsena izahay amin'ny famoahana toeram-pivarotana avo lenta avo lenta sy seranan-tsambo avo lenta. Ny vokatra vita amin'ny kalitaon'ny kalozia avo lenta sy ny fifandraisana dia atao amin'ny faran'ny endriny amin'ny fampiasana teknolojia tsara indrindra sy teknolojia avo lenta amin'ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena. Ankoatr'izany, io kalitao vy ambony karambato io dia ...
90 de SAE FLANGE 3000 PSI, satroka hosoka hosoka, fantson-drano
Ny fampiasana ny traikefa tamin'ny sehatry ny indostria, dia afaka namokatra 90 de SAE FLANGE 3000 PSI, fitaovana hosodoko, fantson-drano. Ireo vokatra ireo dia novokarina tamin'ny fampiasana aluminium, varahina ary metaly manana teknolojia CNC. Ny entana 90 de SAE FLANGE 3000 PSI, fantsona hosoka, fantson-drano dia ...
Vehivavy JIC tsy manara-pofona vy
Fitaovana samihafa fiarovan-jirofo tsy ara-batana JIC, jiro fikambanam-batana JIC fehin-tanana mahazatra hafanana ampiasaina amin'ny sehatra samihafa toy ny Automobile, Oil & Gas etsetra. Izahay dia manamboatra fitaovana mifanaraka amin'ny fenitra DIN 2353 / ISO / SAE / IS , koa izahay dia manamboatra Customized Female JIC fantsom-piraofam-batana hydraulique fandefena araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Material: Stainless Steel ...
Ny kalitao tsara ho an'ny fiara mpamonjy entana banjo traktora fikarakarana
Anisan'ireo orinasa malaza izahay eo amin'ny sehatry ny famokarana, famatsiana, fanondranana, varotra. Famokarana sy fivarotana ny kalitao tsara ho an'ny fiara mpamonjy entana banjo traktora fikojakojana. Ireo no hatsaram-panahy alaina eo ambany fanaraha-mason'ireo manam-pahaizana. Ankoatra izany, dia manana hery tsara sy maharitra izy ireo. Ankoatr'izany, ireo kalitao tsara ireo dia ny "hydraulic adapters banjo".
SS304 Fivarotana ny tavy fitambarana hosodoko
Anisan'ireo mpanome tolotra tsara indrindra ny SS304 Swivel One Piece Type Hydraulic Hose Fit. Ny sokajintsika SS304 Swivel One Piece Fomba fanamafisana ny hydraulic dia fantatra amin'ny maha-mpanohitra azy amin'ny toe-javatra ratsy, ny fanorenana mafy, ny famolavolana azy, ny hentitra, ny lava kokoa ny fikarakarana sy ny fivoahana ambony. Ny vokatra tsara indrindra dia ny SS304 Swivel One Piece Type Hydraulic Fit fitness amin'ny ...
JIC 45 degre Hydraulic hose fittings Fiat fitting 26741
Ankoatra ny traikefa ara-indostria manankarena, dia miezaka ny manamboatra, manondrana entana, mividy ary manome ny JIC 45 degre Hydraulic Hose Fittings Fiat fiady 26741. Ny fiantohana JIC 45 degre Hydraulic hose fittings Fiatànan'ny vehivavy 26741 dia azo jerena amin'ny karazan-tsafidy samihafa hisafidianana. Ity JIC 45 degre Hydraulic Hose Fittings Fitaovana Fiantanana 26741 dia novolavolaina tamin'ny fanamafisana ny kalitao ankapobeny izay ao an-tsaina.
Ny lehilahy metrika malefaka ao anaty lavaka fantsom-barotra karbonika
Anisan'ireo anarana azo itokisana izahay mba hanolorana ny lehilahy metrical hydraulique amin'ny fiaramanidina karbonika hosodoko ho an'ny mpanjifanay. Ny fitaovam-pitaterana malefaka mahazatra amin'ny hydraulique amin'ny menaka fitrandrahana karbôna dia manamboatra fitaovana avo lenta avo lenta. Manolotra ny lehilahy metrika malefaka amin'ny fitrandrahana kalozika ny fatorana hosoka manjavozavo dia ampiasaina amin'ny fomba samihafa.
YH HYDRAULIC dia nanamboatra sambo fitondran-jaza isan-karazany
Ny orinasanay dia heverina ho manolotra ny YH HYDRAULIC manambon-trano fitifirana hosodoko isan-karazany amin'ny mpanjifa. Ny YH HYDRAULIC dia mitaky ny fantsom-pamokarana hosodoko isan-karazany amin'ny ankapobeny dia mitaky be loatra amin'ny tsena, noho ny fanorenana mafy orina, ny fiainana lava, ny fampiasana maimaim-poana ary ny fanoherana ny korontana. Ny lafin-javatra atolotra dia am-pankasitrahana betsaka amin'ny mpanjifa noho izy manana toetra tsy azo ianteherana sy mahavariana. This YH ...
Hydraulic Hose Adapter Fitting stainless steel pipe
Anisan'ireo anarana azo itokisana izahay mba hanolorana ny Hydraulic Hose Adapter Fitrandrahana Rohila ho an'ny mpanjifa. Ny fametrahana ny halavan'ny Hydraulic Hose Adapter Fiatoana fananganana vy tsy tapaka dia vita amin'ny vato avo lenta avo lenta. Nanolotra Hydraulic Hose Adapter Fitrandrahana Rohila fanitso tsy tapaka no tena ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany. Ireo Hydraulic Hose Adapter Fitrandrahana tsy tapaka vy ...
fitaovana hosodoko mafy ho an'ny fiara fitaterana Parker Standard
Amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny tsena amin'izao fotoana izao, dia manolotra fiara tsara indrindra ho an'ny fiara fitaterana mafy orina ny Parker Standard. Ny fiantohana fiara fitaterana mafy orina tsara indrindra Parker Standard dia omena amin'ny mpivarotra avy amina tsenam-barotra mifandraika amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Fantaro ny fiatoana fanerena mafy ho an'ny fiaramanidina Parker Standard manohitra ny paikady samihafa mba hahafahanao ...
Momba ny YH Hydraulic
Ningbo YH Factory Hydraulic Machinery dia napetraka tamin'ny 2003 miaraka amin'ny orinasa ao Ningbo, Sina. Ny seranan-tsambo akaiky akaiky indrindra dia ny seranan-tsambon'i Ningbo. YH Hydraulic dia orinasa manokana izay mamokatra sy manome pandehan'ny hosoka, hydraulic ferrules, adapter fittings, hydraulic hoses, hydraulic machines, Etc.
DX68 CE STEER LOADER HOSE crimping machine 4 "4V 380V 400V
Fiompiana akoho karbady NPT hydraulic quick coupling
2 "YH51M hosoka fantsom-pandehanana hosona
Fitaovam-pamokarana hosoka / vy
Ny metrika vehivavy 24 Degree Cone O-RING fiara fitaterana hosoka azo ampiasaina
Low price! CE 9sets maimaim-poana ny fitaovana fikororohana fikorotan-drivotra fikorotanana
Mifidiana ny fiteninao: